Xukumadda oo Ciidamo dheeraad ah gaysay Dhuusamareeb
Wararka ka imaanaya Magaaladda Dhuusamareeb ee Caasimada Maamulka Galmudug ayaa sheegaya in maanta halkaasu ay ka degtay Diyaarad sida 60 askari oo ka tirsan ciidanka Xoogga gaar ahaan kuwa Gor Gor oo ka tirsan Ciidanka Danab ee Soomaaliya.
Ciidamada la geeyay Magaaladda Dhuusamareeb ayaa la dajiyay xerada 21aad halka kuwii horay ugu sugnaa laga saaray, ku waas oo haatan Gaadiidkooda Dagaalka la arkayo Gudaha Magaalada Dhuusamareeb.
Ciidamadaan lagu arkay Bartamaha Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa wata Taliyaha qaybta 21 aad ee Ciidanka Xoogga dalka Generaal Cabdicasiis Cabdulaahi Qooje iyo saraakiil ka tirsan guutada 15 aad ee qaybta 21 aad ku waas oo lagu aas aasay Ciidankii Ahlusunna ay ku wareejisay Dowlada Faderaalka Soomaaliya.
Wararka ay axadle helayso ayaa intaasi ku daraya in ciidanka Dowlada Soomaaliya gaysay Dhuusamareeb ay hordhac u yihiin Wafdi uu hoggaamiyo Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo Sabtiga ku wajahan Dhuusamareeb.
Ciidamadaan ayaa ku biiraya boqool kale oo Dowlada Soomaaliya Gaysay Dhuusamareeb si ay ugu qayb qaataan sugida Amaanka Magaalada Dhuusamareeb oo la qorshaynayo in lagu qabto Doorashada Madaxtimada iyo tan baarlamaanka Maamulka Galmudug.
Shacabka ku sugan Dhuusamareeb ayaa soo sheegaya in Xaalka Magaalada Dhuusamareeb yahey Mid aan daganayn isla markaana Magaalada lagu arkayo Gaadiidka Dagaala ee Milatariga Soomaaliya iyo kuwa Ahlusunna.
Waxaana Maanta Degan Xaaladda Magaalada Dhuusamareeb Ee Caasimadda Galmudug ka dib wada-hadal aan toos ahayn oo ay yeesheen Masuuliyiinta Ahlusunna iyo Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku wada sugan Magaalada , Dhinacyadan ayaa ka wada hadlay in laga sheeqeeyo ilaalinta Nabad-galyada Caasimada.